Indlela yokukhetha iimpahla zokuhlamba
Unokukhetha njani iimpahla zokuhlamba? Ufuna ukuthenga umatshini wokuhlamba, into yokuqala yokucinga ngohlobo lwakho lokuhlamba isitolo, ngokulinganiselwa kotyalo-mali luhlulwe kwiivenkile ezincinci, iintlobo ezintathu zezinto zokuthengisa eziphakathi kunye neendawo ezinkulu, ukuba ufuna ukuqiniseka ngakumbi uhlobo lwakho lovimba, ungabonisana ne-ENEJEAN ukuhlamba i-franchising, banokukunikezela ngesitoreji somnyango sangasese, ukucwangciswa komzobo kunye nokuhlaziywa kweemarike zendawo. Xa ubeka uhlobo lwesitori, ungathenga izixhobo zokuhlamba ngokubhekiselele kwimeko ekhoyo.
Ngokubanzi, ivenkile yokuhlamba idinga ukumisela umatshini wokuhlambela i-oyile, umatshini, umshini wokutywala, i-generator kagesi, insimbi yombane, intengo ye-32000 RMB, unokukhetha ukongeza i-computer ye-alexipharmic ityeya, inani elingu-2000 RMB, iingubo zokupakisha umbane kwiRMB 5000.
Ivenkile ephakathi? Unokuqwalasela inkqubo yekhompyutha yokuzithengisa ngokuzenzekelayo, itekitini yokuzikhupha i-single-door disinfection table, i-tableing ironing, kunye nanjalo njengaye, le xabiso ngokulandelanayo kwi-8000 RMB, 2000 RMB, 3000 RMB, ixabiso lesistim yokugcina i-intanethi phakathi kwe-70000 ukuya kwi-140000 i-RMB. Ukuba kuyona nto igcinwe, kufuneka ukuba ulungelelaniso oluphambili, olunjenge-tetrachlorethylene yokuhlamba umatshini kufuneka i-70000 RMB, i-elution ye-frequency ye-frequency kunye ne-5 RMB kwi-50000, njengoko umatshini wokuhlamba kunye nomzobo malunga ne-9000 i-RMB. utyalo-mali oluthile malunga ne-240000 RMB okanye kunjalo, ngokuqinisekileyo, utyalo-mali + ukunyamezela, ukulawulwa ngononophelo kuzakuhlala kukho ukubuyiswa okulungileyo, i-psychology ye-investor\_'s jikelele ukuthenga ngokuzithengileyo, ukuthenga izinto zokusebenza zokuhlamba, ngokuqinisekileyo, ziya kuphaphama. I-ENEJEAN yokuhlamba i-franchising inesiqalo sokucwangciswa kobugcisa ngokubhekiselele kwisixhobo sokuhlamba, izixhobo ezipheleleyo kunye neziphambili, ukufikelela kumgangatho wamazwe ngamazwe, kunye nexabiso elungileyo, kunokugcina iindleko ezithile, ukuthelekisa nokwazi.
Inqaku lokugqibela: Umshini wokucoca oomileyo onok...
Inqaku elilandelayo: Lapho izixhobo zokucoca ezinom...